သင့်ရဲ့ Brain On Porn - Reddit "fapstronaut" ကအားလုံးကိုထုတ်ထားတယ်
Reddit“ fapstronaut” ကအားလုံးကိုထုတ်လွှတ်လိုက်တယ်
ကျွန်မတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားချည်၌ဤ post ကိုလုပ်သောနှင့်ငါက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ချည်လုပ်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ တစ်ဦးကသူချင်း fapstronaut porn နှင့်အတူပြဿနာများကိုရှိခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်, ဒါငါနှင့်အတူအကြိုးဒဏ်ခတ်ငါ့ကိုငါ / ရှိဖူးသောငါ၏ကိစ္စများအများစုကိုယ့်ကိုယ်ကိုရန်နှင့်ထိုအရပ်၌များစွာသောအခြားသူများကိုထွက်မှသီးသန့်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်စေတော်မူ၏။
ဒါကြောင့်ခင်ဗျားအောက်မှာဖတ်ခဲ့တာကမင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ် K9 ကိုကြိုးစားပြီးအခြားစကားဝှက်တစ်ခုတောင်မှအလုပ်မလုပ်ပါ သင်အလွယ်တကူ uninstall လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်နောက်ဆုံး၌ porn ကိုအခြားအရာတစ်ခုခုနှင့်အစားထိုးရန်ကြိုးစားသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကအဲဒါကိုကျန်းမာအောင်သေချာအောင်လုပ်ရမယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာများကိုကျွန်ုပ်ကဲ့သို့အမှန်တကယ်စွဲနေပါကတိုက်တွန်းမှုသည်မခံမရပ်နိုင်သည့်အခါ k9 ကိုသာဖယ်ထုတ်လိမ့်မည်။ ခင်ဗျားပြောခဲ့တာတွေအားလုံးကငါနဲ့လည်းအံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါတို့က Papalovs ခွေးတွေလိုအေးစက်ပြီးဖုတ်ကောင်ထဲရောက်သွားတယ်။
အရက်မသောက်ရန်သတိရပါ၊ ကျွန်ုပ်အရက်မူးနေပြီးကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာတစ်ဝိုက်တွင်မရှိသောနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေသည့်အချို့ကိုထုတ်ပယ်ရန်အခက်အခဲရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာသူကပြောတယ်ကွန်ပျူတာ maaaan! အထူးသဖြင့်ညဥ့်နက်သန်းခေါင်အချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်အိပ်ပျော်ရန်အဆင်ပြေသည့်အချိန်ဟုခံစားရသည်။
ငါ့ကိုစိတ်ထိခိုက်စေတဲ့အရာအားလုံးကိုငါရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်၊ အကယ်လို့သင်ကအကြံပြုချက်တစ်ခုခုကိုတွေ့ရင်အဲဒါကတွန်းအားကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ မင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုမင်းသိလိုက်ရတယ်၊ ငါဟာရှည်လျားတဲ့ Streak လုပ်ပြီးပြန်ပြန်ပေါ်လာတယ်။ ဦး နှောက်ကလုံးဝ reboot မလုပ်ဘူး။
ငါနဲ့မင်းတို့ဟာအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာကြပြီးငါတို့နှစ် ဦး စလုံးအတူတကွစနစ်တကျလုပ်ဆောင်ကြမယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသေချာစေသည်။ my ကျွန်ုပ်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်၏တံဆိပ်ကိုတင်မည်။ ငါလုပ်နိုင်တာကိုသက်သေပြမယ်
ယခု မှစ၍ စ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတွေ့မြင်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ဒါဟာကျနော့်အမြင်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမပဲ့ပြင်တာပဲ။ သင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏ nsfw subreddits အားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်၏စိန်ခေါ်မှုမှသတိရမှတ်စုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ငါသည်ငါ့ရှည်လျား Streak စဉ်အတွင်းမွငျလြှငျအကြိုးခံစားခှငျ့များစာရင်း:
1 ။ သာယာတဲ့ခံစားခဲ့ရ
2 ။ ခံစားသမျှကို
3 ။ လူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလိမ္မာပဲ!
4 ။ မိန်းကလေးများအကြှနျုပျကိုသတိပြုမိလိမ့်မယ်
5 ။ အထွက်များနှင့်စကားဖြစ်ဖို့နဲ့စကားပွောနှင့်သွားလာခြင်းမှနက်ရှိုင်းတတ်ပြီးရှိခဲ့ပါတယ်။
6 ။ ပိုကောင်းတဲ့အာရုံ
7 ။ နက်ရှိုင်းသောစကားသံ
8 ။ ပိုကောင်းတဲ့အနံ့ကိုခံ ယူ. ,
9 ။ စကားစမြည်စဉ်အတွင်းဆိုနိုင်ပါတယ်
10 ။ ကိုယ်အဘို့ကိုတက်ရပ်နေကြ၏။
11 ။ ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်မြင့်လည်းငါခိုလှုံရာ, သင်တို့ကိုငါထဲက shit မျက်စိဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်လိမ့်မယ်။
12 ။ ငါပိုကောင်းတဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆက်သနိုင်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။
13 ။ နောက်နေ့မျှော်နေ့စဉ်ရှာဖွေနေ!
14 ။ Music ကိုပိုကောင်းတံပိုးမှုတ်သောအခါ
15 ။ ပိုပြီးဖန်တီးမှုခံစားရတယ်။
၁၆။ နေ့စဉ်ငါနိုးသောအခါစွမ်းအင်ရှိခဲ့သည်။ မည်သည့်စိတ်သည်မြူမှု၊
17 ။ အိုးအကယ်စင်စစ်ငါပြောချင်ပထမဦးဆုံး 42 လအတွင်းရက်အတွင်းတိုင်းမိန်းကလေးလုပ်နေတာစဉ်းစားတော့ဘူး။ ငါ၏အလိင်စိတ်ပြန် လာ. အဖြစ် 87 န်းကျင်ခက်သို့မဟုတ်ဒီတော့တယ်။
18 ။ ငါပိုကြည့်ကောင်း
19 ။ အားကစားရုံအထူးစုပ်စက်အကြီးခံစားရ
20 ။ သင်သည်သင်၏စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူ In-ညှိရနှင့်သင့်အသက်တာ၏စစ်မှန်သောပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။
21 ။ ပိုများသော hard drive ကိုအာကာသ: p (ငါသိ)
23 ။ ရီးရဲလ်မိန်းကလေးငယ်များဒါဆွဲဆောင်မှုကိုကြည့်!
24 ။ အကြှနျုပျ၏ flaccid လိင်တံရှည်ကြည့်ရှုနဲ့ကျွန်မအကြောင်းအံ့သြဖွယ်ခံစားခဲ့ရ, oh အကယ်စင်စစ်နှင့်သင့်လိင်တံကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ချောမွေ့စွာခံစားမိပါလိမ့်မယ်။
25 ။ ငါ့မျက်နှာလျော့နည်းမစုံလင်ခြင်းနှင့်ရေနံ buildup ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကောင်းတဲ့ရှာဖွေနေအသားအရေရှိခဲ့ပါတယ်။
26 ။ ငါသည်ငါ၏အသက်တာ၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အကြှနျုပျ၏လက်သည်းကိုက်တော့ဘူး။
၂၇။ ပညာရေး - သင်အတန်းတက်နေချိန်မှာပါမောက္ခပြောတာကိုသင်ပိုမိုအာရုံစိုက်မိသည်။
၂၈။ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပိုမိုနားလည်လာလိမ့်မည်။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိစိတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အပြုအမူများကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာသတိပြုမိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စူပါပါဝါရှိခြင်းနှင့်တူသည်။
29 ။ စွန့်စားမှုဆည်းပူးနေပိုမိုလွယ်ကူသလိုခံစားရတယ်။
၃၀။ fuck ဆိုတဲ့သဘောထားမထားပါနဲ့ (မင်းဟာ asshole တစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး)
ဤအကျိုးကျေးဇူးများကို nofap ၏ပထမ ၂ လ (သို့) အစောပိုင်းကာလအတွင်းသတိပြုမိနိုင်သည်။ သင်လုပ်ရမှာကတော့ porn နှင့် fapping မပတ်သက်သရွေ့ဘာမှမလုပ်ပါနှင့်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်မလှောင်ပါနဲ့။ အနားကဖြတ်က porn ကို ဦး တည်သွားတယ်။
အခါတိုင်း sexy အတှေးအတက်လာသို့မဟုတ်ပင် flashbacks သငျ့စိတျထဲမှာအပေါ်ကြီးမားတဲ့အနီရောင်က x ထားတော်မူ၏။ pushups သလား, ဝေးလမ်းလျှောက်တစ်ပြေးထွက်သွားပါ။
1 ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်သင့်ကိုယ်ပိုင်အစားအသောက်ချက်ပြုတ်, မအမြန်အစားအစာ။ (သကြား, ပေါ့ပ်နဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အရာကိုမဆို Cut)
2 ။ အိပ်စက်ခြင်း၏ 8 နာရီ Get
3 ။ ထိုကဲ့သို့သော, shaving မဝင်, သင့်လက်သည်းဖြတ်တောက်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်သတို့သား။
4 ။ သင့်ရဲ့အခန်းကိုသန့်ရှင်းရေး
5 ။ ဒါကြောင့်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့2မိနစ်ကြာလျှင်သင်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်သောသူတို့ပြုပါ!
6 ။ တစ်ပါတ်3သို့မဟုတ်4ရက်ပေါင်းတစ်ဦးအားကစားရုံလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကပ်အလုပ်လုပ်ဖို့ပုံရသည်။
7 ။ တချို့လူတွေကသူတို့အဘို့တရားထိုင်အကျင့်ကိုကျင့်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီ။
8 ။ ထိုကဲ့သို့သောဒါဝိဒ်သည်ဘန်းအားဖြင့် Intimate ဆက်သွယ်မှုအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အကူအညီနဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပါ။
၉။ သူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖိတ်ကြားချက်ကိုမငြင်းပါနှင့်။ (သူတို့မြည်းကောင်တွေဆိုတာခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားရှိရင်သူတို့နဲ့မဆက်သွယ်ပါနဲ့)
၁၀။ တတ်နိုင်သမျှအထွက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။ အထူးသဖြင့်ဆောင်းရာသီနှင့်သူငယ်ချင်းများစွာထွက်ခွာသွားသည့်အခါသူတို့ဘွဲ့ရခဲ့ကြသောကြောင့်သူငယ်ချင်းများ (သို့) လူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်မလိုဘဲဤသို့ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် porn ကို Facebook, youtube နဲ့ reddit စသဖြင့်အစားထိုးမထားပါနဲ့။
12 ။ သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းများအားလုံးကိုဖျက်; porn sites များရန်သင့်ဆက်စပ်လင့်များများအားလုံးကိုဖျက်။
သငျသညျ fapping မပါဘဲသင်ပျော်မွေ့စေတော်မူပြီဘာမှလုပ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်, သင်စဉ်းစားသောအရာပျော်စရာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ... အစပိုင်းတွင်သင်သည်ဤကဲ့သို့သောလိမ့်မည်ငါ့အဘို့ဘာမှမလုပ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချသောဤသေးငယ်တဲ့အရာတို့ကိုလုပ်ဖို့ပျော်စရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ငါနေရာတိုင်းကိုငါ့အဝတ်ကို left, ရေချိုးခန်းသုံးစကားမပြောနိုင်သောခဲ့သည်ထင်။ ယခုငါအဆက်မပြတ်ရေချိုးခန်းလုပ်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။
အချို့ကဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်ဖျော်ဖြေရေးပုံစံများကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်အစပိုင်း၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဂိမ်းတစ်ခု (သို့) နှစ်ခုကစားရန်တစ်ခါတစ်ရံကြိုးစားသည်။ MMORPG ကဲ့သို့သောစွဲလမ်းစေသည့်အရာများကိုရှောင်ရှားပြီး၊ ပုံပြင်လိုင်းများနှင့်ကစားသည့်တစ်ခုတည်းသောကစားနည်းဂိမ်းများကိုကစားခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင်နေရာတိုင်းမှာလိင်ရှိတာကိုမင်းသတိပြုမိမှာပါ၊ ဒါ့ကြောင့်သင့် ဦး နှောက်က 2D ဖြစ်နေတာကြောင့်အတုအဖြစ်ခွဲခြားတော့မယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါတို့စိုးရိမ်တာမဟုတ်ဘူး။
သင့်ပန်းတိုင်များ၊ အထူးသဖြင့်သူငယ်ချင်းများအကြောင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုမပြောပါနှင့်။ သူတို့သည်သင်၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားကိုစိတ်ထဲမထားဘူးဆိုရင်သူတို့ကမင်းကိုရှာတာကမင်းကိုလှောင်ပြောင်လိမ့်မယ် သင်၏ရွယ်တူချင်းများကသင်၏အကဲဖြတ်ချက်အချို့ကိုသင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်အောင်မြင်ပြီဟုသင့် ဦး နှောက်ကယူဆပြီးယခုထိုအလေ့အထကိုပြန်သွားရန်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလှည့်စားပါနှင့် (ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ shlong အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ရုံမျှဖြင့်ဤကဲ့သို့သောအရာများကိုစစ်ဆေးပါလိမ့်မည်) (IT Fucking Works …အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်)
ခံစားချက်များကိုသင်၏ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထများနှင့်မဆက်စပ်ပါစေနှင့်၊ Flashback သည်သင်၏စိန်ခေါ်မှုအရှိဆုံးကျပန်းအချက်များတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အများစုမှာပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ သင်ပြန်လာသည့်အခါဝမ်းနည်းမနေပါနှင့်၊ ၎င်းသည်သင့်အားစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးခဏကြာလျှင်သင်စိတ်ဓာတ်ကျလိမ့်မည်။
ဖြစ်နိုင်လျှင်အရက်မသောက်ပါကနောက်တစ်နေ့တွင်သင်၌အရက်နာကျသည်ဟုခံစားရပြီးနှစ်ရက်အကြာတွင်ခေါင်းကိုက်ခြင်းခံစားရလိမ့်မည်။ (အကယ်၍ သင်သည်ရှည်လျားသောလမ်းပေါ်တွင်ရှိနေပြီးနောက်တဖန်ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုမြင်တွေ့ရလျှင်သင်သည်သကြားလုံးဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ရှိနေသည်ဟုခံစားရပါလိမ့်မည်။ )
တစ်: အများကြီးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်များ (ဦး နှောက်ကခင်ဗျားကိုတင်ထားတယ်လို့ထင်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံဖို့လိုတယ်) ... မင်းဒါကိုကိုင်တွယ်ရမယ်။ သငျသညျအများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့ကြပုံရသည်နီးပါးထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိခဲ့ပါတယ်, ယခုသင်ဘာလုပ်ရမှန်းသိ။
နှစ်: စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်အကြီးအကျယ်ဆုတ်ခွာခြင်း၊ အချို့သောနေ့ရက်များသည်သင်အလွန်အမင်းဝမ်းနည်းပြီးအချို့နေ့များ၌သင်အလွန်ပျော်ရွှင်မည်ဟုခံစားရလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်မင်းဟာ spikes ကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ သင်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းနှင့်နှာခေါင်းပေါက်ခြင်းများဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီအဆင့်မှာမင်းလည်းရင်သွေးငယ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်၊ သင့်ငပဲကိုရပ်တန့်ပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်လှုံ့ဆော်ပေးမလားဆိုတာသံသယဝင်မိနိုင်တယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့မပတ်သက်ဘူး…နောက်ဆုံးမှာတော့နံနက်ခင်းသစ်ကိုရင့်ကျက်တဲ့နေ့တိုင်းသင်ရရှိလာလိမ့်မယ်။ ခံစားရတယ်
ဒီအဆင့်မှာသင်ဟာပစ္စည်းတွေအများကြီး၊ အတိတ်ကလွဲချော်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေ၊ သင်လုပ်နိုင်တာတွေ၊ မင်းပြောနိုင်တာတွေ၊ သင်လုပ်နိုင်တာတွေအတွက်နောင်တရလိမ့်မယ်။
သုံး: ပျော်ရွှင်မှုခံစားရခြင်းနှင့်လှောင်အိမ်ထဲမှကျိုးပဲ့ခြင်းဖြစ်ခြင်းသင်ယခင်ကသင်လုပ်ခဲ့သမျှကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ သင်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အတွက် porn ကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူး။ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ တီဗွီအစီအစဉ်များသည်သင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလို။ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ပိုမိုတွေ့ဆုံလိုသည့်အခါ LIFE သည်သင်၏ကစားကွင်းဖြစ်သည်။
လေး: အကယ်၍ သင်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းအလောင်းကိုမရရှိပါက၎င်းသည်နောက်ဆုံး၌ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုသင်ကိုယ်တိုင်ပြောပြလိမ့်မည်။ သငျသညျလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်လာလိမ့်မည်နှင့်သင်ဤအကျင့်ကိုကျင့်စတင်ခဲ့ပြီးအကြောင်းရင်းများကိုမေ့လျော့လိမ့်မယ်သင်ဤကဲ့သို့သောဖြစ်လိမ့်မည်မည်သူမဆိုနာကျင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေလိမ့်မည်နှင့်သင်ခဏအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှမသံသရာအတွက်ပြန်သွားပါ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်သံသယတွေ၊ နောင်တရမှုတွေ၊ စိတ်ကျရောဂါတွေစုဆောင်းခြင်းဟာသင့်ကိုပထမဆုံးဆုတ်ခွာခြင်းအဆင့်ထက်အဆိုးရွားဆုံးအထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကိုကုသပေးနေတယ်ဆိုတာမင်းသတိရပါ။ အနာဂတ်အတွက်မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်။
ငါ့ကိုအထဲကကကူညီပေးခဲ့ကြောင်းအချို့က tools များ:
porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် (အချို့လူတို့သညျကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်မည်သို့သူတို့က fixed ရှင်းပြ, သင်ယူဖို့လည်းကောင်းသောဗီဒီယိုများ)
သငျသညျသို့မဟုတ်ဘာမှမစိတ်ပျက်စရာမဖြစ်ဖို့, ငါ့ခရီးစဉ်အတွင်းနောက်ဆုံးအဆင့်ငါကအပေါ်မဆိုစာဖတ်ခြင်းမဟုတ်သကဲ့သို့ငါကအဘို့ပြင်ဆင်မခံခဲ့ရအဖြစ်ငါ့ကိုပယ်ရှား, ဒီ၌နေသောလူအများစုဆက်ဆံရေး၌ရှိကြ၏သို့မဟုတ်ခဲ့ သူတို့ဟာလိင်မဆက်ဆံဘူး၊ သူတို့မှာ ED မရှိတာသတိထားမိခဲ့ကြတာပေါ့။ ငါကတော့ဒီကိစ္စကိုလုပ်နေတယ်။ မူလတန်းကျောင်းကစပြီးစွဲလမ်းနေတယ်။ ငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးတိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းများပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ ကျွန်ုပ်တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရတော့ဒီတိုးတက်မှုနှင့်ငါ့ဘဝအတွက်အတားအဆီးဖြစ်လာသည်။ ငါပျော်ရွှင်ချင်တယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့အတူနေချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာငါ့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောရည်မှန်းချက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်၊ ငါတို့အောင်မြင်နိုင်မယ်! နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရောက်ရှိလာပြီးကြိုးစားရန်ကြိုးစားနေသည်။
TL; DRမင်းကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးနဲ့၊ ယောက်ျားတွေအတွက်ဒီအရာအားလုံးကိုရေးဖို့ငါအမြဲတမ်းယူခဲ့တယ်။
လင့်ခ် မူရင်း post မှ